Antonio Conte oo u hanqal taagaya shaqada Manchester United | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Antonio Conte oo u hanqal taagaya shaqada Manchester United
Antonio Conte ayaa lagu soo waramayaa inuu iska diiday fursad uu ku noqon lahaa tababaraha cusub ee kooxda Newcastle United , iyadoo tababaraha reer Talyaani uu u taagan yahay booska Manchester United .
52 jirkaan ayaa Inter Milan u horseeday hanashada horyaalka Serie A ee xilli ciyaareedkii hore laakiin wuxuu ka tagay kooxda dhamaadkii ololaha sababo la xiriira kala aragti duwanaanshaha guddiga.
Sida laga soo xigtay saxafiga reer Talyaani Fabio Santini , Newcastle ayaa la xiriirtay Conte si ay u siiso fursad uu ku noqdo tababaraha cusub ee kooxda ka dib markii ay la wareegeen.
Si kastaba ha ahaatee, Santini ayaa ku andacoonaya in Macalinka uu iska diiday Magpies -ka, maadaama uu “sugayo wicitaan Manchester United”.
Cadaadiska ayaa ku sii kordhaya tababaraha Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ka dib qaab ciyaareed liita, in kasta oo kooxda heysata horyaalka Ingriiska ee 20ka jeer la sheegay inaysan qorsheyneyn inay ceyriso tababaraha reer Norway haatan.
Conte, oo ku guuleystay Premier League iyo FA Cup intii uu maamulayay Chelsea, ayaa la sheegay inuu horay u aqoonsaday saxiixiisii ​​ugu horreeyay ee Man United haddii uu taleefan ka helo kooxda.
Red Devils ayaa wajihi doonta Atalanta BC tartanka Champions League caawa ka hor inta aysan galabta axada ku soo dhaweynin kooxda ay xifaaltamaan ee Liverpool.
Previous articleBarcelona oo dooneysa Youri Tielemans xili ay jiraan dhibaatooyin dhaqaale
Next articleManchester United ayaa bisha Janaayo iska iibin doonta shan ciyaartoy oo kooxda koowaad ah
Senator Mashruuc oo R/W Rooble u diray farriin la xiriirta dagaalka...
Cole oo Amaanay Labo Xidig ee Muhiimka u ahaa Guushii Chelsea...